DEG DEG: Feeraryahankii caanka ahaa Maxamed Cali Kalaay oo geeriyooday
Saturday June 04, 2016 - 10:20:10 in Wararka by Mogadishu Times
Feeraryahankii caanka ahaa Maxamed Cali Kalaay ayaa ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, halkaasoo khamiistii la dhigay, markii xaalad deg deg ah soo wajahday.
Waxaa lagu wadaa in lagu aaso magaaladaLouisville ee gobolka Kentucky, sida ay sheegeen eheladiisa.
Maxamed Cali waa feeryahan caan ah oo u dhashay dalka maraykan. Maxamed Cali oo dadka soomaaliyeed u yaqaanaan magaca "Maxamed Cali Kalaay” ayaa taariiikhdu markay aheyd 17.January 1942 ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo ku yaal Koonfurta Mareykanka. Kalaay oo ka dhashay qoys heysta Diinta Masiixiga ayaa waxay waalidkiisu ugu wan qaleen magaca Cassius Marcellus Clay jr. M. C. Kalaay waxa uu ku guulaystay Tartanka Feerka Miisaanka Culus tiro sadex jeer ah. Sidoo kale waxuu muddada 20-ka sanno ah ee uu ku dhex jiray Cayaaraha Feerka ku guuleystay inuu noqdo Horyaalka Aduunka sanadaha 1964, 1974 iyo 1978. Sanadkii 1999 ayaa Kalaay loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee Caalamka soo mara Qarniga 20aad.
1964 ayay ahayd markii ugu horaysay uu Kalaay si la yaab leh uga guulaystay Feeryahanka ahaa Horyaalka Miisaanka Culus ee lagu magacaabi jiray Sonny Liston. Waxuuna Kalaay isla mar ahaantaas la wareegay Suunka cadeynta u ah in uu noqday Horyaalka Aduunka ee Feerka Miisanka Culus. Kalaay oo markaa da’diisu ahayd 22 sanno ayaa noqday Feeryahankii ugu da’da yaraa ee ku guuleysta Suunka Feerka Miisaanka Culus ee taariikhda aduunka soo mara. Muddo yar ka dib markii Kalaay uu noqday Horyaal ayaa waxa uu si lama filaan ah warbaahinta Caalamka uga sheegay in uu qaatay Diinta Islaamka. Sanadkii 1965 markuu Kalaay si rasmi ah ugu biiray Diinta Islaamka ayaa waxuu magaciisa hore ku bedelay magaca islaamka ah ee Maxamed Cali. Kalaay waxa uu qaatayDiinta Islaamka isaga oo aan ka laheyn wax dan qaas ama qarsoon. Waxaana xataa dhici kartay inuu Kalaay talaabadaas ku waayo taageerayaashiisa aad ka u tira badnaa. Laakiin waxa dhacday taasi bedelkeed oo ah in taageerayaasha iyo shacbiyadda uu Kalaay ku lahaa gudaha dalka Mareykanka iyo Caalamka intiisa kaleba ee aad u sii kordheen.
Sannadkii 1967 waxaa cirka isku shareeray dagaalkii Vietnam ee mareykanka uu ku lug lahaa waxaana markaas Maxamed Cali Kalaay loogu yeeray in uu shaqada qaranka ka qayb qaato. Kalaay taas wuu diidey asagoo sheegay cudur daar diineed awgeed in uusan dagaalka u aadayn. Waqtigaas wuxuu ahaa imaam Muslim ah. Diidmadiisu waxay dhalisay hal ku dhegga caanka ah ee Cali oo ah "I aint got no quarrel with them Vietcong” – [wax muran ah nagama dhexeeyo anigu iyo iyaga vietnam].
Hal ku dhegaas wuxuu dhalliyey in dhammaan gobolada maraykanka ay waxba kama jiraan ka dhigeen shatigii feerka ee Maxamed Cali Kalaay. Feerkii ugu dambeeyey sannadkii 1967 ayaa waxaa dhacday in ninkii la feertamayey oo ahaa Ernie Terrell uu ugu yeray "Clay”, markas ayaa Maxamed Cali intuu soo boodey ku yiri "Waa maxay magacaygu?!!”
Ninka qaban qaabiya ciyaaraha feerka ee la yiraahdo Don King ayaa sheegey in labada feeryahan ee maxamed cali kalaay iyo George Foreman ay ku feertami doonaan dalka Zaire ee khaarada afrika waxaana uu feeryahanada u ballan qaaday lacag aan horay loo maqal oo gaareysa 10 million oo dollar. Maxamed Cali markuu uu tegey caasimada Kinshasa, dadkii Afrikaanka ahaa wuxuu ka helay dhiiri gelin aad u sareysa, aad ayaana halkaas looga jeclaa. Marka uu feertamayo waxay ugu dhawaaqyeen "Ali Bomaye!” oo ah afka reer Zaire taas oo la macne ah "Cali ninka dil”.
Waxaa Diyaariyay Golof iyo Caseyr